Home Wararka (Deg Deg) Ciidamada Jubbaland oo dagaal kula wareegay magaalada Balad Xaawo
Ciidanka Jubbaland ayaa caawa abaarahii 2:30 la wareegay gacan ku haynta magaalada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo. Dagaal ka dhacay halkaas ayaa CXDS ee ku sugan magaalada Balad Xaawo aay iska caabin kari waayeen ciidamada Jubbaland oo soo weeraray.
Goobjoogayaal aay MOL la hadashay ayaa noo xaqiijiyay in ciidanka Jubbaland aay gebi ahaanba gacantooda aay ku jirto magaalada Balad Xaawo, halka CXDS aay bannaanka uga baxeen magaalada.
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku eedeysay dowladda Kenya weerarkii caawa looga qabsaday magaaalada Balad Xaawo ee ku taal xuduudda labada dal ay wadaagaan.
Wararka aan ka heleyno Beledxaawo ayaa sheegaya inuu halkaas ka dhacay dagaal culus kadib markii halkaas ay saqdii dhexe ay duullaan ku soo qaadeen Ciidamada Cabdirashiid Janan. Wararka ayaa sheegaya in xaafado ka mid ah Beledxaawo qabsadeen ciidankaas.
Eedeynta culus ee caawa ka timid dowladda federaalka iyo weerarka Cabdirashiid Janan ayaa kasii dari doonta xiisadda ka dhex-oogan labada dal, xilli ay toddobaadyadii dhowaa jireen wa-xoogaa isu soo dhowaasho ah.
Hoos ka aqriso qoraalka DF Soomaaliya ka soo saartay